Salesforce Yakabatanidzwa Mafomu neFormstack | Martech Zone
Salesforce Yakabatanidzwa Mafomu neFormstack
Chipiri, Gunyana 8, 2009 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Kana iwe wakambogadzira mubatanidzwa neSalesforce API, unoziva kuti yakasimba sei… asi kwete hazvo kuti zviri nyore sei. Webhu-To-Inotungamira uye Webhu-kune-Vanotaura haina kuoma, asi ichiri kuda kuti iwe ugadzire ako mafomu ewebhu nemaoko. Kudos ku formstack yekusunungurwa kwavo kwazvino, uko kunopa yakapusa Salesforce Kubatanidza!
Tags: nezvimiroformstackformstack kusanganasalesforcemafomu ekutengesavatengesi vanobatanidzwa
Sep 9, 2009 na1:39 PM
Thanks Doug! Tinofara kuti pakupedzisira tagadzirira uye takatangwa.